Ambulaanis diiday inay usbitaal geeyso wiil soo galooti ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kayda sawirrada: Erik Abel/Scanpix.
Ambulaanis diiday inay usbitaal geeyso wiil soo galooti ah
La daabacay fredag 22 mars 2013 kl 11.30
Maamulka shaqaalaha gargaarka degdegga ah ee magaalada Gävleborg ayaa baaritaan ku sameeyn doona dhacdo la xiriirtay wiil qaxooti 16-jir ah oo aan helin dar-yeelkii uu uga baahnaa, maadaama ay ka gaabsatay aambalaaskii u qaadi lahaa xarunta gargaarka degdegga ah kadib dhaawacyo ka soo gaaray markii uu ka soo booday daaqad lix mitir dhulka ka sareeysa.
Sida ku qoran war-bixinta ciidanka ammaanku in shaqaalihii gaariga aambalaasku diideen iney wiilkaa u qaadaan cusbitalka gargaarka degdegga ah. Middaasi ayuuna ku tilmaamay madaxa gawaarida gargaarka degdegga ee carrigaasi Jörgen Tranevik inay tahay tallaabo halis ah.
- Waa wax lala fajaco halisteeda. Annaga ayaa baaritaan ku sameeyn doona oo eegi doonna sida wax u dhaceen, sida uu sheegay
Wiilka 16-jirka ah ayaa ka soo booday daaqad, kolkii uu diidmo ku helay dalabkiisii magan-gelyo doon, isagoona ku sugnaa deegaan ay ku nool yihiin dhallaanka keli-nimada dalka ku yimaada ee magaalada Gävle, sida uu qoray war-geeyska Arbetarbladet.Balse ey diideen shaqaalihii gaariga ambalaasku iney wiilkaa u kaxeeyaan xarunta gargaarka degdegga ah.
Wiilka ayaaney ka muuqan dhawaacyo loo jeedo, hase yeeshee qabow u il-darnaa, maadaama uu daaqadda oo furan muddo fadhiyay. Dabadeed waxaa cusbitalka u qaaday ciidanka ammaanka.
Jörgen Tranevik, madaxa laanta gawaarida degdegga ayaa dhaleeceeyn isu jeediyay.
- Sawirkan maaha midka aan dooneyno in hoowshayada laga qaato. Bulshada ku dhaqan gobolku waa iney ku kalsoon yihiin hab-kulanka hoowl-wadeennada gawaarida gargaarka degdegga. Waa inaan matalnaa daryeel wanaagsan iyo ammaan in nalgu heli karo, sida uu sheegay Jörgen Tranevik.